သင်ကိုယ်တိုင် Psychopath ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်မယ့် အချက်များ - Real Gaming Myanmar
သင်ကိုယ်တိုင် Psychopath ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်မယ့် အချက်များ
Psychopath ဆိုတာဟာ ခန့်မှန်းမိဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သတိထားမိဖို့ အခက်ခဲဆုံး ဗီဇတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Psychopath တစ်ယောက်ဟာ အရမ်းကိုစွဲဆောင်မှုရှိပြီး လန်းနေတတ်သလို၊ အရာအားလုံးဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲ ဖြစ်နေလို့ပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ Psychopath တွေမှာ အကောင်းအဆိုးဝေဖန် ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းနဲ့ စာနာမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့တွေဟာ သူတစ်ပါးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သူ၊ အကြမ်းဖက်သူတွေနဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူသတ်မှုတွေမှာ အများဆုံးတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် …. ။
ဒီလိုမျိုး ဗီဇရှိနေတဲ့ သူတွေဟာ မွေးရာပါ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ Psychopath တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ ကုသရမှာဖြစ်ပြီး ရာဇဝတ်မှုတွေမကျူးလွန်မိအောင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းလို့ရတာကြောင့် သင်ဟာ Psychopath တစ်ယောက်များဖြစ်နေမလားဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. ။
၁. လူတော်တော်များများက သင့်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ လှပတယ်၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး အဲလိုအသွင်ဖြစ်အောင်လည်း ဖန်တီးတတ်သလို၊ အဲလိုအသွင် မပေါ်အောင်လည်း လုပ်တတ်တယ် ….. ။
၂. တစ်ခုခုကိုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင် ချက်ချင်းလုပ်တတ်တယ်။ လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း ဘယ်တော့မှ နောင်တမရတတ်ဘူး။ အဲ့ဒီ့အရာကြောင့် တစ်ဖက်သား ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး ….. ။
၃. တစ်ခုခုဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်သွားတယ်၊ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင်တောင် သင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖက်လူရဲ့အမှားကြောင့် ….. ။
၄. ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်ဖူးတယ် …. ။
၅. တစ်ခုခုလုပ်ပြီဆိုရင် အကောင်းဆုံးပဲလုပ်တယ်။ ဘယ်သူမှ သင့်ကိုမမှီဘူး …. ။
၆. လုပ်ချင်တာကို လုပ်လိုက်ရမှကျေနပ်တယ်။ တစ်ဖက်လူ ထိခိုက်ရင်တောင် လုပ်လိုက်ရမှကျေနပ်တယ် ….. ။
၇. တစ်ယောက်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေရင်တောင် ဒါသူ့ပြသနာနဲ့သူပဲလေ၊ ကူညီရမယ်လို့လည်းမတွေးမိသလို စိတ်မကောင်းလည်း မဖြစ်မိပါဘူး ….. ။
၈. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတဲ့ အရာတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ဖူးတယ်၊ ပါဝင်ပတ်သက်ဖူးတယ် ….. ။
၉. လိုချင်တာကိုရဖို့ လိမ်ပြောရရင်လည်း သင့်အတွက် ပြဿနာမရှိပါဘူး ….. ။
၁၀. လက်ရှိကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ အနာဂတ်တွေဘာတွေ စိတ်မဝင်စားဘူး .. နောင်ဖြစ် နောင်ရှင်းပဲ။ သင့်အတွက်က လက်ရှိပဲ အရေးကြီးဆုံး ….. ။
၁၁. ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခုခု၊ လုပ်လိုက်မိတဲ့ အရာတစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ နောင်တလည်းမရဖူးဘူး၊ ရှက်ရွံ့သလိုလည်း မခံစားရဖူးဘူး။
၁၂. သင့်ကိုသင် ဘယ်အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ တာဝန်ယူရမယ့်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
အထက်ပါအချက်တွေထဲက (၅) ချက်နဲ့ အထက် တူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ Psychopath တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရနေပါတယ်။
Psychopath ဆိုတာဟာ ခနျ့မှနျးမိဖို့၊ ဒါမှမဟုတျ သတိထားမိဖို့ အခကျခဲဆုံး ဗီဇတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ Psychopath တဈယောကျဟာ အရမျးကိုစှဲဆောငျမှုရှိပွီး လနျးနတေတျသလို၊ အရာအားလုံးဟာ သာမနျလူတဈယောကျလိုပဲ ဖွဈနလေို့ပါ။ တကယျတမျးမှာတော့ Psychopath တှမှော အကောငျးအဆိုးဝဖေနျ ပိုငျးခွားနိုငျစှမျးနဲ့ စာနာမှုလုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ သူတို့တှဟော သူတဈပါးကို ညှငျးပနျးနှိပျစကျသူ၊ အကွမျးဖကျသူတှနေဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ၊ လူသတျမှုတှမှော အမြားဆုံးတှမွေ့ငျရတာဖွဈပါတယျ …. ။
ဒီလိုမြိုး ဗီဇရှိနတေဲ့ သူတှဟော မှေးရာပါ ဦးနှောကျဖှဲ့စညျးမှုကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့သငျဟာ Psychopath တဈယောကျဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ စိတျပညာရှငျတှနေဲ့ ကုသရမှာဖွဈပွီး ရာဇဝတျမှုတှမေကြူးလှနျမိအောငျလညျး ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးလို့ရတာကွောငျ့ သငျဟာ Psychopath တဈယောကျမြားဖွဈနမေလားဆိုတာ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့ တိုကျဆိုငျစဈဆေးကွညျ့လိုကျပါဦးနျော …. ။
၁. လူတျောတျောမြားမြားက သငျ့ကို ဆှဲဆောငျမှုရှိတယျ၊ လှပတယျ၊ အေးဆေးတညျငွိမျတယျလို့ ပွောကွတယျ။ နောကျပွီး အဲလိုအသှငျဖွဈအောငျလညျး ဖနျတီးတတျသလို၊ အဲလိုအသှငျ မပျေါအောငျလညျး လုပျတတျတယျ ….. ။
၂. တဈခုခုကိုလုပျခငျြပွီဆိုရငျ ခကျြခငျြးလုပျတတျတယျ။ လုပျပွီဆိုရငျလညျး ဘယျတော့မှ နောငျတမရတတျဘူး။ အဲ့ဒီ့အရာကွောငျ့ တဈဖကျသား ဘယျလိုဖွဈသှားမလဲ ဆိုတာလညျး စိတျမဝငျစားဘူး ….. ။
၃. တဈခုခုဆိုးဆိုးရှားရှားဖွဈသှားတယျ၊ အမှားတဈခုခုလုပျမိရငျတောငျ သငျ့ကွောငျ့မဟုတျဘူး။ တဈဖကျလူရဲ့အမှားကွောငျ့ ….. ။
၄. ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှမှော ပါဝငျပတျသတျဖူးတယျ …. ။
၅. တဈခုခုလုပျပွီဆိုရငျ အကောငျးဆုံးပဲလုပျတယျ။ ဘယျသူမှ သငျ့ကိုမမှီဘူး …. ။
၆. လုပျခငျြတာကို လုပျလိုကျရမှကနြေပျတယျ။ တဈဖကျလူ ထိခိုကျရငျတောငျ လုပျလိုကျရမှကနြေပျတယျ ….. ။
၇. တဈယောကျယောကျ ဒုက်ခရောကျနရေငျတောငျ ဒါသူ့ပွသနာနဲ့သူပဲလေ၊ ကူညီရမယျလို့လညျးမတှေးမိသလို စိတျမကောငျးလညျး မဖွဈမိပါဘူး ….. ။
၈. ဆယျကြျောသကျအရှယျတုနျးက ဥပဒနေဲ့ငွိစှနျးတဲ့ အရာတှေ၊ ရာဇဝတျမှုတှေ ကြူးလှနျဖူးတယျ၊ ပါဝငျပတျသကျဖူးတယျ ….. ။
၉. လိုခငျြတာကိုရဖို့ လိမျပွောရရငျလညျး သငျ့အတှကျ ပွဿနာမရှိပါဘူး ….. ။
၁၀. လကျရှိကိုပဲ စိတျဝငျစားတယျ၊ အနာဂတျတှဘောတှေ စိတျမဝငျစားဘူး .. နောငျဖွဈ နောငျရှငျးပဲ။ သငျ့အတှကျက လကျရှိပဲ အရေးကွီးဆုံး ….. ။
၁၁. ကိုယျပွောလိုကျတဲ့ စကားတဈခုခု၊ လုပျလိုကျမိတဲ့ အရာတဈခုခုနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျတော့မှ နောငျတလညျးမရဖူးဘူး၊ ရှကျရှံ့သလိုလညျး မခံစားရဖူးဘူး။
၁၂. သငျ့ကိုသငျ ဘယျအရာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့မှ တာဝနျယူရမယျ့သူ မဟုတျဘူးလို့ ထငျတယျ။
အထကျပါအခကျြတှထေဲက (၅) ခကျြနဲ့ အထကျ တူညီနတေယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ Psychopath တဈယောကျဖွဈတယျလို့ ပွောလို့ရနပေါတယျ။
Previous: သင်္ကြန်အချိန်ရောက်တိုင်း အနားမှာအတူမရှိနိုင်တော့မယ့် ချစ်သူကို သတိရလွမ်းဆွတ်နေခဲ့တဲ့ နီလန်
Next: သင်္ကြန် ပိတ်ရက်မှာ ထိုင်းစတိုင် ရောင်စုံ မုန့်လုံး အုန်းနို့ အချိုပွဲ လုပ်စား ရအောင်